Omunye ozithandayo wefilimu abathanda kuyinto ahlekisayo. Ngemva kokukhululwa kwe-ukuqashwa kwe-movie "The Guqula-Up," kuba sobala ukuthi wayeyoba impumelelo. Isihloko izidumbu exchange njalo ukukhathazeka, izimpikiswano ezaphakanyiswa abalobi, futhi sisondelene kakhulu nabo bonke labo babe nezingane futhi abangane. Abadlali of the ifilimu "I Guqula-Up" baziwa ibhizinisi ifilimu, futhi abathandwa izethameli emhlabeni wonke. Umdwebo unika umbukeli eningi okuhle kanye ithuba lokucabangisisa ngokuziphatha injabulo yabo siqu kuphela.
A ifilimu ngabangane ebuntwaneni uDave uMitch, nokuthi kunesidingo sokuthi sikuthokozele kulokho onakho, abanawo umona kwabanye. Dave usezuze okuningi: nguye ummeli yimpumelelo onendlu umsebenzi omuhle, umfazi omuhle futhi izingane ezincane. Kodwa ukuphila ngokunganaki komngane wakhe, kubonakala sengathi ethakazelisa kakhulu. Mitch - bachelor, futhi heartthrob ongenayo ukuze ubuhlobo, professional ensimini kanye efulethini. Man ezilindele ngokulangazela ukujabulela ukuphila "is emhlweni" kodwa umona ukuzinza kanye nomndeni injabulo nezinye.
Kwaziqondanela nje ukuba abangane imilingo ushintshanisiwe emizimbeni futhi ngenxa yalokho uhlala. Mitch budedengu kuzofuneka ukuthi banakekele izingane namanye, ukulondoloza umsebenzi wakhe, umndeni kanye bakwazi ukuphunyula eziphikelelayo ukuhlukunyezwa ubuhle-uzakwabo Dave. Ukuze abhubhise lokho okufakwa umngane wakhe safinyelela eminyakeni. Dave futhi udumazeke ngokushesha emphilweni a hala futhi ngeke lihawukele ngalokho okwenzekile exchange. Okuningi kuyodingeka ukuba nabangane futhi sazana kangcono ngaphambi konke ubuyela evamile.
Ukudalwa ifilimu ngokuqashisa kwezigidi ezingu-52 zamaRandi ukuthi etshaliwe alethwe abadali 75.450.437 zamadola. Abagxeki baziswa ifilimu kahle "I Guqula-Up." Abalingisi ababedlala abangane - Ryan Reynolds kanye Dzheyson Beytman, abathandwa ababukeli abaningi.
Abadali Dzhona Lukasa noScott Moore ifilimu ahlekisayo "I Guqula-Up" - akulona project ngokuhlanganyela kuphela. Omunye scripts edume kakhulu futhi inzuzo, babhala kwaba "The Hangover."
Umqondo ifilimu zazivela abalobi ngenxa abangane babo siqu. Ngolunye usuku baphumula kule nkampani enkulu bejabule, lapho kade Bachelors futhi amadoda umndeni. Lucas kanye Moore kuqashelwe ukuthi igebe phakathi laba bantu nawo njengomnyango mkhulu kakhulu. Abaqondi nomunye, futhi okubaluleke kakhulu, abakholelwa ukuthi ukuphila ngoba "uhlu lozalo" lungaphezu mnandi futhi kulula.
Yavela kanjalo-ke umbono yokudala ifilimu "I Guqula-Up." Umlingisi eyaziwa yezinye izindima, kwahambisana iqoqo yakhe zochwepheshe umsebenzi ezithakazelisayo. Nakuba ifilimu liphathelene nezinkinga zokuphila komkhaya, lolu hlobo luqukethe izigcawu izidakamizwa kolimi oluyinhlamba. Ngakho-ke, ifilimu waklonyeliswa isigaba 17+.
Dzheyson Beytman obuye indoda enomkhaya Dave
Jason - kungesilo kuphela Bateman umndeni, ubani ongase abizwe ngokuthi inkanyezi imboni yamabhayisikobho. Uyise, Kent Umbhali kanye nomqondisi, futhi udade osekhulile - elidumile actress American Zhyustin Beytman.
Nakuba wadutshulwa Jason eminingi umsebenzi wakhe ngempumelelo kakhulu ubhekwa ochungechungeni "retardation." Indima Michael Bluth Bateman baletha udumo "Globes Golden".
Kancane ngaphambili umlingisi uqale umndeni ngokushada Amanda Anka. Ngokushesha lo mbhangqwana kwakukhona amantombazane amabili amahle.
Abadlali of the ifilimu "I Guqula-Up" has a umlando ocebile. Ngakho, Jason Bateman has amabhayisikobho angaphezu kuka-60. Isenzakalo esidume kunazo zonke izinhlamvu ezingu-wakhe movie "Hancock", "Bosses Horrible," "Up in the Air," "Juno" futhi "Smokin 'Aces" futhi-ke: "Lo Guqula-Up."
Ukuze hero Russian iphuma is ezashiwo Daniel Bateman Scheblanov.
Bachelor Mitch - Ryan Reynolds
Abantu nge ezihluke ngokuphelele bengazilawulela khona isigcino umlingisi bahlangana ifilimu "I Guqula-Up." Abalingisi we ifilimu ngezindlela ezahlukahlukene impumelelo nothando izibukeli. Uma Bateman wakhulela emndenini, ujwayelene umkhakha we cinema ke Ryan wazalelwa futhi wakhulela endaweni lapho kudalwa movie ngalutho. Uyise - ayekade eyiphoyisa, wahlanganyela ukudayiswa, unina futhi ukudayisa isisebenzi. Little Homeland Ryan futhi abafowabo abadala - Vancouver.
Ukuba zisezincane, Reynolds inkanyezi ochungechungeni kwentsha, lapho kudlalwa indima Billy. Bese alindela umsebenzi amabhayisikobho amaningi adumile, "kusho uVan Wilder," "I Proposal," "X-Men. Qala. Wolverine, "" Lutho, Mhlawumbe "," Ngifuna wena. "
Abalingisi Reynolds ephethwe ukusebenza, wamchaza ngokuthi umfana abanamakhono futhi funny. Ngo-2003, umklomelo, waklonyeliswa Raymond mkhosi waminyaka yonke wokugubha "Hollywood Young".
ukuphila Siqu Reynolds njengoba ayegcwele njengoba ukuthi hero yakhe, umehluko kuphela wukuthi Mitch wayengakaze washada. A isifunda wayeshade Scarlett Johansson, nabo umshado bahlukana emva kweminyaka 2. Kamuva washada Bleyk Layvli. Kwakungumsebenzi indodakazi, ngubani manje eyisithupha ubudala.
Ngaphambili, State uyakuthanda Awamapharashuthi, futhi kwelinye kuzuba parachute wavula akuyona okokuqala. Lokhu kubonakala insizwa kakhulu, futhi manje uzama ukugwema eziphakeme, ikakhulukazi izindiza.
Leslie Mann in "The Guqula-Up"
Film Izıhlabane - abantu zomphakathi ezaziwayo. Sinenkosi ukuba njalo, njengoba ithalente hhayi kuphela, kodwa futhi umlingisi odumile esikalini lapho ukhetha umdlali lokhu noma ezinye izindima. ukuphila Personal njalo abalandeli nesithakazelo. Kule ndaba, abesifazane nzima ngoba badinga isikhathi ukunakekelwa ingane futhi emva kokubeletha yokutakula.
Kodwa umdlali Leslie Mann akazange enze ukukhetha phakathi umsebenzi nomkhaya. Ngezinye nesikhombisa Leslie wakhetha ezihlukahlukene contender for indima movie "The Ikhebula Guy." Kuleli ifilimu Mann wahlangana umyeni wakhe wesikhathi esizayo, umqondisi Judd Apatow. Ngemva Starring Robin Harris, waba imisebenzi embalwa iimsebenzi eyaziwa kancani. Udumo yaliyisa ifilimu "Knocked Up." Ngemva lo msebenzi amafilimu abadumile zalandela ku-akhawunti Mann: "Uthando esekhulile," "17 Nalapha futhi," "Abantu Funny" nabanye.
Le filimu "I Guqula-Up 'anikeza ugqozi olusha ukuthandeka Leslie Mann. Kulesi ifilimu yena udlala indima Jamie, unkosikazi Dave sika.
Leslie Judd lamadodakazi amabilii. Ubaba kuvame Leslie namadodakazi akhe kumafilimu yabo.
Le filimu "AmaNgisi Iziguli": nabalingisi izindima, sakhiwo isifinyezo
Indodakazi Anastasia Zavorotnyuk - Anna Stryukova: Biography, amaqiniso okuphila, futhi isithombe inkanyezi abasha
Inkolelo-ze - Iyini? Izinkolelo-ze kanye amabika
Chzhou Chang: actress izithombe. Patronus Chzhou Chang
Okufanele ukwenze nokuthi ungayithola kanjani i-mercury uma i-thermometer iphula
Nezikaniso Karelia: yini ukukhetha?